Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Ilaalinta Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Ilaalinta
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Qalabka Ilaalinta oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Qalabka Ilaalinta soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Qalabka Ilaalinta la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.